Rabbi irkannaa, haqa falmannaa ni moona! – Welcome to bilisummaa
Rabbi irkannaa, haqa falmannaa ni moona!
bilisummaa June 11, 2015	Leave a comment
Jireenyi walabnii mirga uumamneefii sarbamne hin jennuu!
Tooftaadhaan gabroomnee qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannuu!
Fafa gabrummaa baadhannee hin teenyu!
Harqoota gabrummaa hamma ifirraa gannuu!
Dhiigaan injifannee, lafeen dhaaba jaarra!
wareegamuudhaafis baaneeti jirra!
Irree nuu tahi yaa rabbi, nu moosisii nu walaboomsii!
Hidhaa fi ajjeechaan, hamilee nu cabsee karaa nu hin deebisu!
Gootota Oromoo Usmayyoo Muussaa fi Abdi Qophee seenaan isin yaadatti!
Previous Voices for voiceless
Next Ethiopia’s Economy: Time for the West to Call a Spade a Spade
1,boraana 2 ,bareentu Booranni Ilmman.12 dhalee isaanis 1,wallagga 2,callabba 3,goree 4,goofaa 5,sidaamoo 6,arii 7,dacee 8,garrii …